Cabi Axmed oo u digey Tigreyga raba inay qabsadaan doorasho - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Raiisal wasaaraha Itoobiya Cabi Axmed ayaa u digey madaxda Tigrey ee raba inay qabsadaan doorasho. Dastuurka dalku ma siinayo inay qabsadaan doorasho. Dhinaca kale hogaamiyaha Oromada ee Jawar Maxamed ayaa qaba inay xaq u leeyihiin.
Dawlada dhexe iyo Tirgeygu waxay rabaan inay dalka qasaan ayuu yiri Jawar Maxamed oo diidan qorshaha Cabi Axmed ee ah in laga gudbo nidaamka u fiican ee Federaal ee uu dhigey Tigreegii bakhtiyay ee Melas Sanaawi.
”Nidaamka Federaalka Itoobiya ayaa dhigaya in gobol kasta goosan karo oo xor noqon karo, wuxuu ogaa in Tigreegu rajo dambe ka lahayn xukunka Itoobiya, nidaamkanse ku gu’i karaan.
Isla nidaamkii Sanaawi ayaa Tigreegu isticmaalayaan, waxase nidaamka goosadka ku faraxsan iyaguna gobolka Soomaali Galbeed oo qaba in ayna ahayn wax laga wada hadli karo in la taabto qodobkaas.
Siyaasadaas is diidan ayaad moodaa in Cabi Axmed meel qaldan kaga Jiro ayuu qabaa Xuseen Warsame. Dadka Oromadu waa dad duli ay badeen Axmaar iyo Tigrey in Cabi Axmed hadda yiraa dastuurkaan bedelayaa wax aan laga fileyn nin Oromo ah.
Doorashada dalka Itoobiya ayaa baaqatey sanadkan inkastoo Tigreegu sheegin xilliga ay qabsanayaan doorashada haddayba dhab ka tahay. Waxase aan shiki ku jirin in Tigreegu noqonayo kan ugu horeeya ee ka go’a Itoobiya.